Lego Star Wars Black Friday သဘောတူညီချက် ၂၀၂၁ Brick Fanatics
Lego Star Wars Black Friday သည် ၂၀၂၁ ဖြစ်သည်
ဝေးဝေး၊ အဝေးက ဂလက်ဆီကနေ လေးလေးနက်နက် ကောင်းမွန်တဲ့ အပေးအယူတချို့ကို မျှော်လင့်နေပါတယ်။ Black ကသောကြာနေ့ဖြစ်နိုင်ချေ များပြားသဖြင့်၊ Lego Star Wars ရက်ရောသောလျှော့စျေးများကိုရယူသည်။
နောက်ဆုံး LEGO Star Wars အနက်ရောင်သောကြာနေ့အထူးလျှော့စျေး
Black ကသောကြာနေ့ ကြီးမားသော ထုထည်အားလုံးကို ဖမ်းဆုပ်ရန် တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ Lego Star Wars လျှော့စျေးများ၊ အပိုဆု VIP အမှတ်များနှင့်အခမဲ့လက်ဆောင်များကိုသင်မျက်စိမြင်ဖူးသည် Lego စျေးဝယ်ပိတ်ရက်တွင်အုပ်စုလိုက်ပြေးသည်။ အကြိုက်များ 75275 A- တောင်ပံ Starfighter, ၇၅၃၀၈ R75308-D2 နှင့် 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship အားလုံးက အဓိကပါ။ Black ကသောကြာနေ့ လက်ဆောင်များဝယ်ယူခြင်းဖြင့် အရည်အချင်းပြည့်မီစေရန်နှင့် VIP အမှတ်များစွာကို စုစည်းထားသော အမြန်လမ်းကို ပေးဆောင်သည့် ပစ္စည်း။
အနည်းငယ် Lego Star Wars sets are currently discounted on the official Lego site, including the Star Wars Brick Sketches.
Ren သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသင်္ဘော၏ 75284 Knights - ယခု£ 64.99, £ 51.99 ဖြစ်ခဲ့သည် -သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်-
75254 ကို AT-ST Raider ကို - ယခု£ 49.99, £ 39.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
40391 ပထမ ဦး ဆုံးအမိန့် Stormtrooper - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
Zavvi ယူကေနှင့် အမေရိကန်
Zavvi UK, USA and Australia have gotanumber of big discounts onarange of major Star Wars လောလောဆယ်မှာ အစုံပါပဲ၊ တော်တော်များများက မကြာသေးခင်ကပဲ ထွက်လာတာ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းကိုနေ့စဉ် update ပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့် ဤစာမျက်နှာကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ပါ။ Black ကသောကြာနေ့ လျှော့စျေး။
၇၅၃၀၈ R75308-D2 - ယခု£ 179.99, £ 159.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
75314 မကောင်းသောအသုတ်တိုက်ခိုက်မှုလွန်း - ယခု£ 89.99, £ 69.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
၇၅၂၅၅ Yoda - ယခု£ 89.99, £ 69.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
75283 သံချပ်ကာ Assault Tank - ယခု£ 34.99, £ 27.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
75297 Resistance X-Wing Starfighter - ယခု£ 17.99, £ 15.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
75298 AT-AT နှင့် Tauntaun အသေးစားတိုက်လေယာဉ်များ - 17.99 ဖြစ်ခဲ့သည်၊ ယခု £15.95
75266 Sith Troopers စစ်တိုက် Pack ကို - ယခု£ 12.99, £ 12.95 ဖြစ်ခဲ့သည် -သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်-
75267 Mandalorian တိုက်ပွဲ Pack ကို - ယခု£ 12.99, £ 12.95 ဖြစ်ခဲ့သည်
75192 ထောင်စုနှစ် Falcon - ယခု£ 649.99, £ 519.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
75257 ထောင်စုနှစ် Falcon - ယခု£ 149.99, £ 104.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
75314 မကောင်းသောအသုတ်တိုက်ခိုက်မှုလွန်း - ယခု£ 89.99, £ 66.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
၇၅၂၅၅ Yoda - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
75288 AT-AT Walker နှစ် 40 ပြည့် နှစ်ပတ်လည် - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
75256 Kylo Ren ရဲ့လွန်းသည် - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
Star Wars ၾသစေတးလ်
75257 ထောင်စုနှစ် Falcon - သည် A$249.99 ဖြစ်ပြီး ယခု A$219.99 ဖြစ်သည်။
75288 ကို AT-AT - သည် A$249.99 ဖြစ်ပြီး ယခု A$199.99 ဖြစ်သည်။
75192 ထောင်စုနှစ် Falcon - သည် A$1,299.99 ဖြစ်ပြီး ယခု A$999.99 ဖြစ်သည်။
ကုန်ဆိုင်Disney UK သည် အထူးလျှော့စျေးအချို့ကို ပေးဆောင်နေသည်။ Star Wars ယခုအချိန်တွင်၊ အချို့သောစျေးအကြီးဆုံးအစုံများအတွက်ရှားပါးစျေးလျှော့နှင့်အတူ။
75293 ခုခံ I-TS ပို့ဆောင်ရေး - ယခု£ 89.99, £ 71.99 ဖြစ်ခဲ့သည် -သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်-
75192 ထောင်စုနှစ် Falcon - ယခု£ 649.99, £ 519.99 ဖြစ်ခဲ့သည် -သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်-
75292 အဆိုပါ Mandalorian Bounty Hunter သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး - ယခု£ 119.99, £ 95.99 ဖြစ်ခဲ့သည် -သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်-
၇၅၃၀၈ R75308-D2 - ယခု£ 179.99, £ 143.99 ဖြစ်ခဲ့သည် -သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်-
Argos သည် အများအပြားကို ကြေညာခဲ့သည်။ Black ကသောကြာနေ့ လျှော့စျေး; အပို 20% လျှော့စျေးအတွက် ရွေးချယ်ထားသော ထုတ်ကုန်များတွင် TOYS20 ကို အသုံးပြုပါ။
တခြားနေရာ, FireStar ကစားစရာများ များအတွက်လျှော့စျေးကိုကမ်းလှမ်းနေသည်။ Brick Fanatics စာဖတ်သူများ။ ဝဘ်ဆိုက်သည် ရှားပါးပြီး စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော အရုပ်သေးသေးလေးများကို ရောင်းချကာ စိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်များစွာကိုလည်း ပေးဆောင်ပါသည်။ အများအပြား Star Wars ရုပ်ပုံအသေးစားများကို မတူညီသော ရုပ်ရှင်သုံးမျိုးစလုံးမှ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ ဆိုက်ပေါ်ရှိ အရာအားလုံးအတွက် 10% လျှော့စျေးအတွက် ငွေရှင်းရာတွင် BF10 ကုဒ်ကို ထည့်ပါ။
ဒီနှစ်တတိယအကြိမ် Lego Star Wars တိုက်ရိုက်စားသုံးသူအစုံ ၇၅၃၀၈ R75308-D2 နှင့် 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship - ဖြစ်ပါတယ် 75313 ကို AT-AT, အ Lego Group ၏ အကြီးမားဆုံးသော Imperial Walker သည် ယနေ့အထိဖြစ်သည်။ ကြီးမားသော ရည်မှန်းချက်ကြီးသော မော်ဒယ်လ်ကို စတင်မိတ်ဆက်သည်။ Black ကသောကြာနေ့£26 / $749.99 / €799.99 အတွက် နိုဝင်ဘာလ 799.99 ။ ဧရာမ စက်ယန္တရားများအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာပါ။ ဒီနေရာမှာကိုနှိပ်ခြင်းထို့နောက်ငါတို့အထဲကစစ်ဆေးပါ အသေးစိတ်သုံးသပ်မှု.
Lego Star Wars Black Friday လက်ဆောင်ဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်သည်
40483 Luke's Lightsaber လိမ့်မည် လွတ်နေပုံရတယ် ၏ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူ 75313 ကို AT-AT ဖြတ်. Black ကသောကြာနေ့ဒါပေမယ့် တရားဝင်အတည်ပြုချက်ကိုတော့ စောင့်ရပါလိမ့်မယ်။ Lego အုပ်စုအဖြစ် Lego VIP တနင်္ဂနွေ, Black ကသောကြာနေ့ နှင့် ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ အားလုံး နီးလာပြီ။
Lego Star Wars: The Mandalorian Black Friday သဘောတူညီချက်များ
ငါတို့အခုမှရှိတာပဲ boost အမှ Lego ဤနွေရာသီ၏လှိုင်း၌ Mandalorian အကွာအဝေး၊ ပထမဆုံးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုပေါ် မူတည်၍ ယခင်အစုံနှစ်ခု Star Wars တီဗီစီးရီးများသည် ၂၀၂၁ တွင်အငြိမ်းစားယူသည်။ 75254 ကို AT-ST Raider ကို နှင့် 75267 Mandalorian တိုက်ပွဲ Pack ကို. ပျောက်ကွယ်မသွားခင် ကောက်သိမ်းချင်ရင်၊ Black ကသောကြာနေ့ မင်းရဲ့ နောက်ဆုံးအခွင့်အရေး ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် 75292 အဆိုပါ Mandalorian Bounty Hunter သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး နှင့် 75315 Imperial အလင်း Cruiser နှစ် ဦး စလုံးသည်ယခုနှစ်မျှော်လင့်ထားသောလက်ဆောင်များနှင့်အတူအရည်အချင်းပြည့်မီရန်သင့်လမ်းကိုကောင်းစွာရောက်နိုင်သည်။
Lego Star Wars Millennium Falcon Black Friday သဘောတူညီချက်များ
75192 ထောင်စုနှစ် Falcon လွတ်မြောက်ပြီး လေးနှစ်အကြာတွင် အားကောင်းနေဆဲဖြစ်ပြီး မကြာမီအချိန်အတွင်း အနားယူမည့် အရိပ်အယောင်များ မပြနိုင်သေးပေ။ တကယ်တော့၊ လောလောဆယ်မှာ စင်ပေါ်တက်ပြီး 2022 ခုနှစ်အထိ ဆက်နေဖို့ စီစဉ်ထားပေမယ့် အဲဒါအတွက် ကမ်းလှမ်းမှု ဒါမှမဟုတ် လျှော့စျေးအချို့ကို မတွေ့ရတော့ဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ Black ကသောကြာနေ့. အခြားမဟုတ်ပါက၊ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော VIP အမှတ်နှစ်ဆနှင့် လက်ဆောင်များဝယ်ယူခြင်းမှ အခွင့်ကောင်းကိုရယူရန် အခွင့်အလမ်းသည် အားလုံး၏အကြီးဆုံးအချိန်ဖြစ်သင့်သည် Lego Star Wars ရက်စွဲအစုံ။
Lego Star Wars အငြိမ်းစားယူခြင်း Black Friday သဘောတူညီချက်များ
19 ၏တစ်ဦးစုစုပေါင်း Lego Star Wars အစုံပါလိမ့်မယ် အငြိမ်းစားယူမည်ဟုသတင်းထွက်ခဲ့သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်ရောနှောခြင်း၌တကယ့်လေးလံသောအလေးချိန်များရှိသည်။ ဒါကမင်းရဲ့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်နိုင်တယ် 75275 A- တောင်ပံ Starfighter, 75251: Dartဇ Vader's ရဲတိုက် နှင့် 75276 Stormtrooper သံခမောက်လုံး - ဆိုလိုတာက အဲဒီ sets တွေအားလုံးအပြင် ကျန်တာတွေက လျှော့စျေးတစ်ခုလို့ စိတ်ကူးထင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ Black ကသောကြာနေ့ နှင့် ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့.
ဥပမာအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတောင်းတဲ့ဈေးရဲ့ ၂၀% ကိုဖြတ်တောက်ခဲ့တယ် ၇၅၂၄၄ Tantive IV စျေးဝယ်ပိတ်ရက်တစ်လျှောက်လုံး ငါတို့က ၂၀၂၁ မှာဒီပုံစံအတိုင်းသွားရင် 75275 A- တောင်ပံ Starfighter အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်ပေါင် ၁၄၄ / ဒေါ်လာ ၁၆၀ / ပေါင် ၁၆၀ ဖြင့်ရနိုင်သည်။
Lego Star Wars Zavvi Black Friday စျေးနှုန်းများ
Zavvi သီးသန့်တတိယ p ဖြစ်သည်arty လက်လီရောင်းချသူ မကြာသေးမီက အများအပြား Lego Star Wars အပါအဝင်အစုံ ၇၅၃၀၈ R75308-D2 နှင့် 75315 Imperial အလင်း Cruiser. ၎င်းသည် ထိုအစုံများအတွက် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော လျှော့စျေးများကို ရှာဖွေရန် တစ်ခုတည်းသောနေရာ ဖြစ်စေသည်။ Black ကသောကြာနေ့ သူတို့ကို ဖမ်းဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်နိုင်တယ်။
ငါတို့နဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် အလုပ်လုပ်ဖူးတယ်။ Zavvi အချို့သော့ခတ်ရန်အလွန်ဆွဲဆောင်မှု Lego Black ကသောကြာနေ့ နိုဝင်ဘာလတစ်လွှား သဘောတူညီချက်များ – လာမည့်ရက်များနှင့် သီတင်းပတ်များအတွင်း နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် ဆိုက်ကို စောင့်ကြည့်ပါ။
Lego Star Wars Blocks မဂ္ဂဇင်း Black Friday အပေးအယူများ
Blocks မဂ္ဂဇင်း ကျယ်ပြန့်သော spectrum ကို ဖုံးအုပ်ထားသည်။ Lego ၎င်း၏ ဒစ်ဂျစ်တယ် ပုံနှိပ်တိုက်နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် စာစောင်များ ဖြတ်ကျော်သည့် အကြောင်းအရာများနှင့် Lego Star Wars ခြွင်းချက်မရှိပါ။ ဝေးကွာသော နဂါးငွေ့တန်းတစ်ခုမှ မကြာသေးမီအစီစဥ်များတွင် ၎င်း၏အဖုံးကို The Book of Boba Fett သို့ လွှဲပြောင်းပေးသည့် Issue 82 နှင့် R79-D2 ကို ငွေရောင်ဖန်သားပြင်သို့ ယူဆောင်လာခဲ့သည့် စိတ်များနှင့် သီးသန့်အင်တာဗျူးတစ်ခု ပါဝင်သည့် Issue2တို့ပါဝင်သည်။
ဖြတ်. Black ကသောကြာနေ့, Blocks မဂ္ဂဇင်း စာရင်းသွင်းသူအသစ်များအတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော မက်လုံးများကို ပေးဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ စာရင်းသွင်းမှုများအတွက် သီးသန့်သဘောတူညီချက်ကိုလည်း သင့်အား ယူဆောင်လာပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
Lego Star Wars Light My Bricks Black Friday စျေးနှုန်းများ
ငါ့အုတ်များကိုလင်းစေပါ တိကျသောအလင်းရောင်တပ်ဆင်ရေးကိရိယာအစုံကိုကမ်းလှမ်းသည်။ Lego အစုံအလင် အပါအဝင် Lego Star Wars မော်ဒယ်အသစ်အဟောင်း။ စူးရှသောအလင်းရောင်ကိုထည့်သည်ဖြစ်စေ၊ 75304: Dartဇ Vader သံခမောက်လုံး or 75296: Darth Vader တရားရှုမှတ်ခြင်းအခန်းသင့်ရုပ်သေးသေးသေးလေးများ၏ မီးလုံးများကို လင်းထိန်စေခြင်း သို့မဟုတ် ယူဆောင်လာပါ။ ၇၅၃၀၈ R75308-D2ဒီ Aussie ရဲ့ အာရုံခံကိရိယာတွေက အသက်ဝင်စေတယ်။ Lego အလင်းရောင်ကုမ္ပဏီက မင်းကို လွှမ်းခြုံထားပြီးပြီ။
လျှော့စျေးကြီးကြီးမားမားကို ရှာကြည့်ပါ။ ငါ့အုတ်များကိုလင်းစေပါ'ထုတ်ကုန်တွေကုန်ပြီ။ Black ကသောကြာနေ့, နှင့် ဘောနပ်စ် သီးသန့် သဘောတူညီချက်များမှတဆင့် Brick Fanatics.
Lego Star Wars iDisplayit Black Friday စျေးနှုန်းများ
အရာခပ်သိမ်းကို နှစ်ရှည်လများ ချေမှုန်းသူသည် အမှုကိစ္စများကို ပြသပြီး ပြသမှုရပ်တည်ချက်ဖြစ်သည်။ iDisplayit ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ Lego Star Wars 75271 Luke Skywalker's Landspeeder ကဲ့သို့သော သေးငယ်သောအတွဲများအတွက် အိတ်များမှသည် ၎င်း၏ကြီးမားသော၊ စိတ်ကြိုက်ကော်ဖီစားပွဲနှင့် 2in1 မျက်နှာပြင်များအထိ အစုံအလင်၊ 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon.
iDisplayit လျှို့ဝှက်ချက်ရှိမည်။ Black ကသောကြာနေ့ အရောင်းအ၀ယ်များကို နေ့ရက်တွင်သာ ထုတ်ဖော်ပြသရန်၊ သို့သော် ၎င်းတို့သည် စောင့်ဆိုင်းရကျိုးနပ်ကြောင်း အလောင်းအစားပြုလုပ်နိုင်သည် - ကျွန်ုပ်တို့သည် မျက်နှာပြင်ထုတ်လုပ်သူနှင့် တန်းစီထားသော သီးသန့်ကမ်းလှမ်းချက်ကဲ့သို့ပင်။
Lego Star Wars FireStar Toys Black Friday စျေးနှုန်းများ
သတ်မှတ်ထားသော စာလုံးများအတွက် စိတ်ကြိုက်မီးရောင်ဓားစောင်းများမှ ပုံနှိပ်ထားသော လက်များအထိ၊ FireStar ကစားစရာများ'အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေက မင်းကို ယူဆောင်သွားနိုင်အောင် ကူညီပေးတယ်။ Lego Star Wars နောက်အဆင့်သို့ minifigures ။ ယခုမှစ၍ Black ကသောကြာနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်ကုဒ် BF10 ကို အသုံးပြု၍ အရောင်းနှင့် အပေးအယူများကဏ္ဍရှိ လျှော့စျေးရှိပြီးသားထုတ်ကုန်များအပါအဝင် အရာအားလုံးကို 10% လျှော့စျေး ရနိုင်ပါသည်။
ပိုကောင်းတာက အဲဒီကုဒ်နဲ့လည်း တွဲဖက်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ FireStar ကစားစရာများ' အသစ်ထွက်ရှိထားသော StarPoints ပရိုဂရမ်သည် နောင်ဝယ်ယူမှုများတွင် သုံးစွဲရန် သစ္စာစောင့်သိမှုအမှတ်များကို ပေးဆောင်သည် (ထို့အတူ၊ Lego အဖွဲ့၏ကိုယ်ပိုင် VIP အစီအစဉ်)။
Lego Star Wars Lightailing Black Friday စျေးနှုန်းများ
မင်းရဲ့ အလင်းရောင်ကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် Lego Star Wars အစုံထွက်စစ်ဆေးပါ အလင်းရောင်. အမှီအခိုကင်းသောလက်လီရောင်းချသူအချို့၏အကောင်းဆုံး Lego Star Wars lighting kits တွေ ပါ၀င်ပါတယ်။ ၇၅၂၅၅ YodaJedi Master's lightsaber (နှင့် အဝေးမှပင် activated လုပ်နိုင်သည်) နှင့် စိတ်ကျေနပ်ဖွယ် အစိမ်းရောင် တောက်ပမှုကို ပေးစွမ်းသော၊ 75306 မှာ Imperial စုံစမ်းစစ်ဆေး Droidအသေးစိတ်သော droid နှင့် ၎င်းတွင်ထိုင်နေသည့် stand နှစ်ခုလုံးကို တောက်ပစေသည့်၊
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြီးမားသောအရာများကို မျှော်လင့်နေပါသည်။ အလင်းရောင် ဘို့ Black ကသောကြာနေ့ထို့ကြောင့် သင့်အချို့ကို အနည်းဆုံး သိမ်းဆည်းရန် သေချာပါစေ။ Lego သင်၏ လက်ရှိစုဆောင်းမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် ဘတ်ဂျက်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့အတွက် သီးသန့် လျှော့စျေးရှိမယ်။ Brick Fanatics စာဖတ်သူများရော…
နောက်ဆုံးနှင့်အကြီးမြတ်ဆုံးအရာအားလုံးအတွက်ဤစာမျက်နှာကိုပုံမှန်စစ်ဆေးပါ Lego Star Wars Black ကသောကြာနေ့ အပေးအယူအဖြစ်နှင့် ၎င်းတို့ကို အတည်ပြုပြီးသည့်အခါ။ နောက်ထပ် ဘာကိုမျှော်လင့်ရမလဲဆိုတဲ့ စိတ်ကူးကို သင်ရှာနေတယ်ဆိုရင် Black ကသောကြာနေ့ 2021 အားလုံးတွင် Lego အကြောင်းအရာများ, ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ.